China i-HDPE grooved i-ultra-quiet drainage pipe pipe ifektri abakhiqizi | UShengyang
Gcina izinto zokusetshenziswa nokulahleka okuphansi
Amapayipi e-HDPE nokufakwa kokuxhuma okujwayelekile okushisayo kushisa isikhathi esisodwa, futhi okufakwa ngeke kusetshenziswe futhi. Indlela yokuxhuma emgodini ingahlukaniswa, izingxenye namapayipi angasetshenziswa kabusha, kusetshenziswe ngokugcwele izinsiza, konga amandla namandla nezinsizakusebenza ezidingekayo ekusetshenzisweni kwesibili; ngesikhathi senqubo yokufaka, amapayipi e-HDPE axhunywe ngemilomo eyisicaba, ngaphandle kwezingxenye ezigqagqene. Uma kuqhathaniswa nezinye izindlela zokuxhuma, ukuxhumeka kwendandatho yengcindezi okuyingqayizivele kunganciphisa inani lepayipi.
Uxhumano oluhlukile lwe-clamp, ukufakwa okusheshayo
Akunasidingo sokuncibilika okushisayo ngesikhathi sokwakhiwa, kungakhawulwanga yimvelo yokufaka, isimo sezulu, izinga lokushisa, njll., Umthwalo wokufaka endaweni usuncishisiwe, futhi ukusebenza kahle komsebenzi kuyathuthukiswa. Ngokuya ngezivivinyo zangempela, uma kuqhathaniswa namapayipi wensimbi, inani elifanayo lobunjiniyela lifakiwe, futhi isikhathi sokwakha esidingekayo okungenani sincishiswe ngaphezu kwengxenye. Amapayipi e-PVC-U awakwazi ukufakwa kuzinga lokushisa eliphansi noma lapho lina, lokhu kufakwa kungenziwa ngendlela efanayo.
Umklamo wesayensi nowokunengqondo, indandatho yokufaka uphawu lwenjoloba eyingqayizivele ye-C ukufeza ukubekwa uphawu kathathu, ukuqinisekisa ukuthembeka kophawu lokuxhuma, futhi kungakhokhela kahle ukuphambuka kwepayipi ku-eksisi.
Ukusebenza okulula nokonga
Ukufakwa okusheshayo, okususekayo nokungalondolozwa. Gcina izisebenzi ngaphandle kobuchwepheshe obukhethekile. Gwema amaphutha ukuthi indlela yokuxhuma isokhethi idinga abantu abaningi nabasebenzi. Ukufakwa kuyashesha futhi kulula, okunciphisa kakhulu izindleko zokufaka. Njengoba iphoyinti ngalinye lokuxhuma liyiphuzu le-pivot kanye nechweba lokulungisa, lingaqedwa, futhi uhlelo lwamapayipi lungenza izinguquko eziningi eziguquguqukayo ukuze zivumelane nekusasa ngaphandle kokungeza izindleko ezingeziwe.
Indlela yokuxhuma eguqukayo ehlanganisiwe ingavimba ukuhanjiswa okuqhubekayo komsindo, inciphise ukudlidlizela, imunce umsindo, futhi ithuthukise ikhwalithi yendawo yokuhlala. Ngokuya ngokuhlolwa kwale nkampani, umsindo wokudonswa kwamanzi ongaphansi kwama-decibel angama-49 uma kwenzeka izakhamizi ezinezitezi eziningi zisebenzisa izindlu zangasese ngasikhathi sinye.
Zonke Usayizi Hdpe Amanzi Tubing Pipe
Ipayipi le-Black Hdpe Drainage
Amapayipi we-Hdpe Pipe
Amapayipi we-Pe Corrugated Pipe
Amapayipi Amanzi Amdaka Amapayipi